Zohery Tours – Washington DC Sightseeing Tours
Fitetezam-paritra Washington DC
Andro feno Washington DC & Mount Vernon Tour
Grand Tour of Washington DC & Arlington Cemetery
Alexandria & Mount Vernon Tour
Tendrombohitra Vernon Tour + Washington DC Night Tour
Fitsidihana manokana an'ny DC
Fitsidihana fanabeazana ho an'ny mpianatra
Fitetezana an-tserasera virtoaly
Bus sy fiara amidy
Manofa mpitari-dia DC Tour
Lasa mpitari-dia DC 100 dolara isan-kerinandro
Tsidiho ny Washington DC Tours
Tongasoa eto amin'ny Zohery Tours - Washington DC Tours
Zohery Tours dia iray amin'ireo orinasa lehibe manolotra fitsangatsanganana any Washington DC. Efa ho 30 eo ho eo izy io no nanao raharaham-barotra ary nahafaly ny mpizaha tany an'arivony mitsidika avy amin'ny vazan-tany rehetra. DC dia tanàna tsy manam-paharoa izay maneho ny lasa amin'ity firenena ity miaraka amin'ireo tsangambato rehetra manana ny tantarany.
Miaraka amin'ny Zohery Tours ianao dia mahazo ny traikefa farany amin'ny fizahan-tany DC. Asehoy anao mihoatra noho ny tranobe sy tsangambato misy ny renivohitry ny firenena. Mandeha fitsangatsanganana ara-tantara ianao mandritra ny fotoana hahitanao ny toerana anaovan'ny mpanao lalàna sy ny mpanentana ny tanàna izay ataony. Aiza no anontana ny volanao. Tany nivavahana ny Filoham-pirenena sy ny olo-manan-kaja hafa. Aiza no hihinanan'ny VIP ny sakafo antoandrony, na jogging, na mandeha an-tongotra amin'ny fiatoana maraina.
Ny sasany amin'ireo mari-pamantarana lehibe ho hitanao amin'ny dianay dc dia: The White House, The US Capitol, The Jefferson Memorial, the Lincoln Memorial, The World War II Memorial, The Martin Luther King Memorial, Union Station ary ny maro hafa…
Ny famandrihana fitsangatsanganana miaraka aminay no vavahadin'ny dia mankany amin'ny dia taloha sy miverina amin'ny ankehitriny. Ny dianay dia tantaraina miaraka amin'ny mpitari-dalana mivantana izay hilaza aminao ny tantara ao ambadiky ny mari-pamantarana rehetra ao an-tanàna. Miaraka amin'ny be dia be hojerena sy ny fotoana kely, dia nanamboatra fonosana fitsangatsanganana ho anao izay mety amin'ny ankamaroany. Manana fitsangatsanganana isan'andro izahay - The Grand Tour of Washington, DC - ary fitsangatsanganana hariva - Washington After Dark. Ary ho an'ireo izay te hiala amin'ny lalan-kizorana, dia manana serivisy fitetezam-paritra manokana izay hamboarina araka ny filanao sy ny safidinao.
Midira ao amin'ny sambo ary ho entina amin'ny fitsidihan'ny andro fampianarana any DC ianao, karazana fitsangatsanganana fahatsiarovana mahafinaritra.
avy amin'ny 400 block New Jersey Avenue, eo amin'ny zoron'ny lalana D NW Washington DC 20001